Oduu tarkaanfii WBO ZK godiina Gujii lixaa 19 / 07 / 2020 |
Irree fi gachaana ummata oromoo wbon ZK godiina Gujii lixaa keessa socho’u waraana faashistii mootummaa shiftaa itiyoophiyaa koloneer Abiyi qubtuma WBO aanaa Galaanaa ganda dangoo bakka addaa waajji jedhamutti weeraraa bobba’e WBOn dursee itti qophaa’uun lola ganama hari’a (19/07/2020) sa’aa 8:00Am hanga sa’aa 9:00Amti taasifameen WBOn injifannoo boonsaa galmeessuun isaa hubatamee jira. Akka odeesse naannoo dhufaa jirutti network kutamulleen diinarra kasaarraan guddaan dhaqabuu isaa du’aa fi madoo hedduu gara karaatti guuraa jiraachuu fi konkolaataa ampulaansii 3 madoo fuudhanii gara naannoo kibbaa magaalaa calalaqixxuutti hanga waaree duraatti guurtessuun yoo hubatamuu reefaa fi madoo hedduu kara karaatti hanga sa’aa kanaatti guuraa jiraachuu namooti hordofaa jiran ni ibsu. Waraanni gabroofataa kasaarraan guddaan irra gahe kun shororkaa guddaa keessa seenee ummata naannoo aarii bahuu waan maluuf of eegannoo guddaa ummati akka taasiisu dhaammatu. Bali’inaa injifannoo WBO akkuma nu dhaqabeen isin dhaqabsiifna.
Adoolessa 19 / 2020
Jaal Marroo Dirribaa Kumsaa Ajajaan Waraana Bilisummaa Oromoo Zoonii Lixaa gaaffilee miidiyaaleen garaagaraa dhiyeessaniif kallattiin deebii kennuuf guyyaa har’aa 07/20/2020 waaree booda 2PM EST tti nidhiyeeffama. Deebii gaaffilee kunneenii kallattiin sabaaf dabarsuuf miidiyaaleen saddeet ol kallattiin akka dabarsan beekameera. Warraaqsi Galaana Uummataa yeroo ammaa akka guutuu Oromiyaatti labsamellee maal akka fakkaatu nituttuqama. Kanaafuu, ibsoota bal’aa qindaa’an kana kallattiin dabarsuuf ODM qophiisaa xumurateera. Kanaafiis qindeessitoota sagantaa kanaa kan ta’an miidiyaa “Arrata Biyyoolessa Oromiyaa/Oromia National Media’ faana waltumsuun miidiyaaleen Bilisummaa uummata Oromoof tumsuu barbaadan sagalee WBO fi Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo isin dhageessisuusaa kan itti fufu ta’a.
Previous articleSomaliland calls for dialogue between Ethiopia and Egypt over Nile dam
Next articlePandemic spells doom for Ethiopia’s chicken farmers